FLAC waa mid ka mid ah qaabab ugu caansan oo la hubiyo in user helo xayeysiis audio ugu fiican iyo sidoo kale tayada video gudahood boos ugu yar ee suurto gal ah in ay qaadato gal disk adag. Waxaa jira tobanaan kun oo barnaamijka taasoo ay hubiyaan in qaab uu waxaa lagu taageeray laguna user helo natiijada ugu fiican ee arrintan la xiriira oo aan diinta qaabka laakiin nasiib daro weli arrimaha dhacaan iyo tutorial tan loo qoray si ay u hubiyaan in arrimaha ay ka midka yihiin oo dhan xalin iyo user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada dhamaadka tahay.
Qeybta 1: Waa maxay FLAC?
Qeybta 2: Maxaad Windows Media ciyaaryahanka uusan ciyaari karo FLAC?
Qeybta 3: Ku rakib codec FLAC
Qeybta 4: Beddelaan FLAC daaqadaha Media Player qaab socon
FLAC ama codec audio sameecadda ah oo bilaash ah waa codec maqal ah taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada farshaxanka ee la xidhiidha qaababka audio yihiin in ciyaaray isticmaalaya ciyaaryahan oo kala duwan ay. Sidoo kale waa mid ka mid ah codecs in ciyaaraa hab wanaagsan, iyo sidoo kale hubineysaa in tirada files yihiin ciriiri iyo waxaa sidoo kale hoos u dhaceen 50% marka loo badaley isticmaalaya qaab FLAC ah. FLAC waa software ah u furan il in sidoo kale uu leeyahay qaybinta lacag la'aan ah iyo sabab la mid ah waxaa sidoo kale in la xusay in user ah waa in la hubiyo in ugu fiican ayaa loo soo gudbiyay waqti iyo user marnaba wajahaya nooc kasta oo arrinta marka ay timaaddo in la sameeyo waa tagging metadata iyo doonidiina degdeg ah. Shaqeynta guud ee qaab FLAC ah waxaa lagu taageeray oo kaliya ciyaartoyda warbaahinta ugu horumarsan, laakiin codec FLAC on ciyaartoyda yar sare ayaa sidoo kale lagu rakibi karo si loo hubiyo in qaab faylka waxaa lagu taageeray fudayd iyo qanacsanaanta. Marka la soo koobo qaab this si weyn lagu talinayaa kaydinta iyo gaadiidka ee warbaahinta fudayd.
Windows media player waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka oo la hubiyo in user helo natiijada marka ay timaado ah qaabab kala duwan iyo sidoo kale hubineysaa in ugu fiican iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka oo ay sidoo kale ku rakiban arrintan la xiriira kuwaas oo taageeri qaabab kala duwan. Inkastoo windows media player ka taageeraa ku dhawaad ​​50 + qaabab u ciyaaro laakiin nasiib darro aan la qaybiyay by default si ay u hubiyaan in qaab FLAC la ciyaaray iyo tani waa mid ka mid ah arrimaha ay keeni arrintan. Dhinaca kale og haddii user uusan rakibi codecs FLAC loo baahan yahay inay ku ciyaaraan files ka dibna waxa uu noqonayaa sababta labaad si ay u hubiyaan in arrinta aan la xalinin. Saasuuna kuwanu waa laba sababood ee ugu badan si ay u hubiyaan in qaab FLAC aan la soo ciyaaray by windows media player iyo halkan ka tutorial tan loo qoray si ay u hubiyaan in user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira.
Hoos waxa ku codec laba FLAC ugu isticmaalay iyo sare u windows media player oo hubiyo in user helo natiijada ugu fiican ee la xiriirta ciyaaro files FLAC ku WMP:
Waraaqo FLAC ee ay XIPH oo laga helay URL http://www.xiph.org/dshow/
FLAC codec ee ay oos Source ka helay URL http://sourceforge.net/projects/flac/?source=navbar
Tallaabada ugu hagitaan talaabo talaabo si loo soo dajiyo codec FLAC ka http://www.xiph.org/dshow/ ayaa waxaa lagu sharaxayaa sida soo socota:
1. user waa in ay hubiyaan in http://www.xiph.org/dshow/ URL waxaa soo booqday inaad kala soo baxdo files exe sida per version nidaamka
Files 2.Beerta markaas waa in la badbaadiyey in desktop-ka:
3. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in file exe la riixi si rakibo bilaabmaa:
User 4.The u baahan yahay si loo hubiyo in dardar la raacay iyo rakibidda la soo gabagabeeyo. Marka la sameeyo user u baahan yahay si loo hubiyo in nidaamka la billaabeen sidii codec shaqayn doonaa oo kaliya haddii qeybtii nidaamka lagu sameeyey dhamaystiran hab xirfadaysan. Tani waxay sidoo kale ka dhigan dhamaadka habka buuxda oo user markaas awood u yeelan doonaan in ay ciyaari file FLAC isticmaalaya windows media player ah.
Waxaa by fog habka ugu fudud ee loogu talagalay taas oo user a waa tago oo aan weliba hubinayaa in ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka waxaa lagu helay in xiriirkaan. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo heshiis fiican ee aan arin kasta oo convertor ugu wanaagsan waxaa sidoo kale lagu rakibay gal nidaamka in sidoo kale kaa caawin lahaa user si loo hubiyo in haddii ay jirto mar labaad ka dibna user waa in u tagto convertor ugu fiican si toos ah iyo magaca this been abuurtay cabsi badan yahay Wondershare Video Convertor Ultimate. Barnaamijka waa inuu xaqiijiyo in 150+ qaabab waxaa taageera iyo adigoo isticmaalaya convertor taas diinta ka 2D in 3D kale oo suuragal ah si user ah ka heli kartaa ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay marka ay timaado daawashada fiican. Ka dib waa hab ah in ay tahay in la raaco arrintan la xiriira.
1. URL http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html waa in ay soo booqdaan si ay u hubiyaan in user helo natiijada ugu wanaagsan oo file barnaamijka la soo bixi, rakiban iyo barnaamijka waxaa maamula :
2. files ayaa markaas waa in lagu daro garaacida ku dari button files shaashadda guriga barnaamijka ee:
3. file FLAC ayaa markaa waa in la gediyay in ay qaab ah in waxa taageeray windows media player iyo waxaa loo doortay karaa guddi saxda ah ee barnaamijka sida ku cad sawirka hoose:
5.The user waa in la hubiyo in file waa n ugu soo ciyaaray oo isticmaalaya warbaahinta Windows ciyaaryahanka oo markaas la ciyaari lahaa oo aan wax arrintan oo dhibaato sameeyo:
FLAC XIPH Ayna mararka qaarkood Ma sahlan oo dhan
Wondershare Video Convertor Ultimate Si buuxda u deggan oo joogto ah Mid aad u fudud
Wondershare Video Convertor Ultimate waa agabka ugu wanaagsan ee sida miiska kore si aad u hubiso in qaab FLAC la ciyaaray sida baahida user oo ay damac. Sababaha faah sida under:
Wondershare Video Convertor Ultimate waa barnaamijka ugu nabdoon marka loo eego barnaamijyada kale ee la mid ah ku sifayn oo ay u sabab tahay xaqiiqda ah in shirkadda arrintan la xiriira inuu xaqiijiyo in sida ugu fiican iyo habka ugu dadaala la raacay si ay u hubiyaan in barnaamijka uu yahay dhawray taariikhda la isbeddellada farsamo.
Wondershare Video Convertor Ultimate sidoo kale waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan si ay u khariidad iyo taageero qaabka iyo sidoo. Meelaynta ee qaybaha kala duwan waa sida ugu wanaagsan ee loo xaqiijiyo in user kuwaas oo ku cusub yahay barnaamijka waxay shaqeyn karaan oo aan wax arrintan iyo dhibaato.
> Resource > WMP > 2 siyaabaha aad ku ciyaari FLAC la Windows Media Player